Ukusekelwa kwe-Tech | IShijiazhuang Neming Import & Export Co, Ltd.
Amabhantshi ethu wesoftshell enziwe ngendwangu yokusebenza kwekhwalithi engu-3in1.
Indwangu yokwelula yangaphandle i-DWR iqediwe, iphakathi ne-TPU ulwelwesi, ibhoniswe ngaphakathi ngoboya obuncane, Indwangu ayinamanzi, ayinamoya futhi iyaphefumula, ikugcina womile futhi unethezekile kukho konke ukuzidela kwakho kwangaphandle. Ukusebenza okungangenwa ngamanzi kugcina amanzi ngaphandle ngenkathi uhlelo lwe-hydrophilic breathability luvumela umswakama wangaphakathi ukuba uphume. Indwangu yangaphandle ye-DWR iqinisa ikhwalithi engenawo amanzi futhi isiza amanzi ukuba agijime ngenkathi engeza ezingubeni ukusebenza komoya.
Kufanelekile ukuhamba ngezinyawo, ukukhempa, ukukama noma kwenye indawo lapho imisebenzi yakho yangaphandle ikuthatha khona.
Kuyini ihembe eligijimayo?
Ihembe eligijimayo livame ukwenziwa ngezindwangu zokusebenza futhi lenzelwe ukunethezeka okuphezulu ngenkathi kusebenza. Izinhlobo eziningi ezahlukahlukene zenziwa ukuze kuhlaliswe izimo zezulu ezahlukahlukene, izinhlobo zokusebenza, nezintandokazi zomuntu siqu.
Abanye abagijimi bagqoka isikibha esijwayelekile, sikakotini sokugijima, ikakhulukazi uma bengabagijimi ngezikhathi ezithile noma besanda kuqala emdlalweni. Ihembe eligijimayo linezinzuzo eziningi ngaphezu kwesikibha, esinezithukuthuku zentambo kude nesikhumba, ukoma okusheshayo, i-anti-UV, iphunga.
Amahembe amaningi asebenzayo aklanyelwe izinyanga zasehlobo namazinga okushisa afudumele anezintambo ezijuluka nezinciphisa iphunga. Abanye futhi banokuvikelwa kwe-UV okwakhelwe ngaphakathi. Izindwangu ezifaka imicu yesiliva noma ye-ceramic zinikela ngezakhiwo zokulwa nomjuluko nezokulwa nephunga. Izindwangu zokulwa namagciwane nazo zenzelwe ukunciphisa iphunga.
Inhloso enkulu yehembe eligijima ebusika ukuthi lifudumale futhi libe lula. Izinto zokwenziwa, njenge-polyester ne-fiber blends, zivame ukusetshenziswa. Kukhona namahembe asebenzayo asebusika afaka ama-hood noma izimbobo zezithupha emikhonweni ukumboza izandla kancane. Esimweni sezulu esibanda kakhulu, kungcono ukugqoka ngezendlalelo, kufaka okungenani ihembe eligijimayo nejakhethi engasindi eyenziwe ngenayiloni noma enye into emelana nomoya.
Kokubili amahembe agijimayo abesilisa nabesifazane ayatholakala ngemikhono emide, imikhono emifushane, imikhono engenamikhono nezitayela zamathangi. Ukulingana kwalezi zingubo kusuka kumahembe akhululekile kuya kokucindezelwa, alingana kahle kakhulu. Izitayela ze-Neckline zifaka izintamo ezihlekisayo zemfudumalo eyengeziwe, kanye nezitayela ze-v-neck. Ezinye izinto kwesinye isikhathi ezitholakala kumahembe wokugijima zifaka phakathi amaphakethe afakwe uziphu namabhande afihliwe ukugcina izintambo zehedfoni zisendaweni.
Iyini indwangu yokukhipha umswakama?
I-Wicking, isho amandla aleyo ndwangu yokuhambisa umswakama kude nomzimba nendwangu uqobo; ikhono lokuphefumula nokugcina isikhumba somsebenzisi somile ukujuluka.
Indwangu yokukhotha, kusho ukuthi indwangu inama-capillaries amancane kuwo amakhulu ngokwanele ukuvumela umswakama, njengomjuluko, ukhishwe esikhunjeni futhi uphume futhi uhambe. Lokhu kungasiza ukugcina umzimba womile futhi upholile ngisho noma umuntu ejuluka ngenxa yokuzikhandla.
Ukusebenza kwethu okuphezulu, okobuchwepheshe, kwendwangu ephefumula, kungakugcina womile futhi unethezekile usuku lonke. Ungakhathazeki ngokujuluka.
Indwangu ye-Wicking isetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zemisebenzi yangaphandle kusuka ekugijimeleni kuya ezintabeni futhi isetshenziswa kuzo zonke izinkathi zonyaka kodwa isebenza ikakhulukazi emazingeni okushisa abandayo. Ingasebenza njengesivikelo esihle, maqondana nokushisa, futhi. Okufanelekile ngezemidlalo, ukugqoka ukugqoka, isendlalelo sesisekelo, ukugqoka kwezemidlalo njll.
Ukugeza iqhwa: ungayinikeza kanjani ihembe lakho le-T ukuthi ukubukeka okuvuthiwe kokuvuna
Izikibha ezihamba phambili akuzona ezintsha sha, yizo ezigqokelwe futhi ezithambile kusuka ekuwashweni okuningi. Banobuncane beminyaka kubo. Ungasithola kanjani isikibha seT vintage esiyintandokazi kangaka?
Ngezansi kwenqubo yokuhlanzwa kweqhwa:
1, Gcoba ibhola lenjoloba elomile ku-potassium permanganate
2, Dry gaya ihembe le-T ngebhola lenjoloba kumasilinda akhethekile we-rotary. Phakathi nale nqubo i-potassium permanganate izophela indwangu endaweni yokuxhumana
3, Hlola imiphumela yokugeza
4, Geza emanzini
5, Ukungathathi hlangothi nge-oxalic acid
6, Geza emanzini
Ngemuva kwalokho ungathola ihembe lakho elisanda kugqokwa ngevintage.
Uyacelwa ukuthi uqaphele, lokhu kufanele kwenziwe yimboni yokuhlanza efanele, futhi ngesikhathi sokuthunga, kufanele usebenzise izinaliti ezifanele zebhola futhi ushintshe inaliti ngesikhathi. Ngaphandle kwalokho, kunengozi yokulimaza ihembe lakho T ekuhlanzweni.